VTA Gates တွင်ရှိသော Orexin အချက်ပြမှုသည် Synaptic Plasticity (2015) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
J ကို neuroscience ။ 2015 မေလ 6; 35 (18):7295-303. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4385-14.2015.
Baimel ကို C1, Borgland SL2.
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် Dopamine အာရုံခံစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးအဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤဒေသတွင် neuroplasticity စွဲ၏အဓိက features တချို့ကိုအခြေခံလိမ့်မည်။ အလွန်ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုကနေ, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး VTA အတွက် Synaptic plasticity သွေးဆောင်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကောင်းစွာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဤကွဲပြားခြားနားအုပ်စုတစ်စုဘုံ Synaptic အပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်တတ်၏ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။
(စ hypocretin အဖြစ်လူသိများ) Orexin မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုအားပေးအားမြှောက်နဲ့ VTA dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ excitatory Synaptic ဂီယာ potentiates သော VTA သို့ဖြန့်ချိမယ့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic neuropeptide ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့က VTA အတွက် orexin အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (OxR1) မှာပြ dopamine အာရုံခံ၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် plasticity လိုအပ်ကြောင်းပြသပါ။ ကြွက်များတွင် OxR1 ရန် SB 334867 ၏စနစ်သို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်ရေး subunit ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် switch ကိုအပါအဝင် AMPAR / NMDAR အချိုး, presynaptic အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးနှင့် AMPAR နံပါတ်သို့မဟုတ် function ကိုတစ်ဦး postsynaptic ပြောင်းလဲမှုအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့ ။ ထို့အပွငျ SB 334867 presynaptic ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ကျဆင်းခြင်းနှင့် dopamine အာရုံခံမှ excitatory နှင့် inhibitory Synaptic သွင်းအားစု၏ချိန်ခွင်လျှာတစ်ဦးမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ပြောင်းကုန်ပြီပိတ်ဆို့။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် VTA အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် plasticity အတွက် orexin များအတွက်ဝတ္ထုအခန်းကဏ္ဍဖော်ထုတ်သော orexin လုပ်နိုင်တဲ့တံခါးဝတဲ့ယန္တရား dopamine အာရုံခံ၏ output ကိုပေး။
AMPA; NMDA; dopamine, မော်ဖင်းအကိုက်; orexin; ventral tegmental ဧရိယာ